Somaliland oo si rasmi ah ula wareegtay Tukaraq | POHSOMEV.COM
Somaliland oo si rasmi ah ula wareegtay Tukaraq
posted by admin on Fri, 01/12/2018 - 04:06
Kn: Saraakiil ka socda Booliska, maaliyadda iyo milatariga Somaliland ayaa gaaray magaalada Tukaraq kadib markii ay ciidamadoodu si rasmi ah ugala wareegeen Puntland.
Somaliland ayaa ciidamo aad u tiro badan oo si fiican u qalabaysan gaysay jiidda xiisaddu ka taagantahay halka ciidamo aan badnayn oo Puntland halkaasi ka joogayna ay magaalada Tukaraq faarujiyeen markii ay arkeen inaysan kaligood u babacdhigi karin.
Puntland ayaa ku mashquulsan soo dhawaynta iyo maamuuska madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la naawilayaa inay Puntland falcelis ka samayso qabsashada Tukaraq kadib marka martidu ka dhoofto.
Cabdiwali Gaas ayaa ku goodiyay inaan la mahadin doonin cawaaqib xumada ka dhalata weerarka ay Somaliland ku soo qaaday Puntland, halka Somaliland ay ku hanjabtay in hadii Puntland ay hadalka dayn wayso ay Garoowe gaari doonaan.
Isku soo duub oo, xiisadan taagan ayaan dan ugu jirin shacabka lagada gobol oo si nabad ah isu dhexmara, ganacsigooduna isu furanyahay.